» बेनीमा पाँच किलोमिटर दुरीको भाडा १३० रुपैयाँ !
बेनीमा पाँच किलोमिटर दुरीको भाडा १३० रुपैयाँ !
२५ भाद्र २०७६, बुधबार १५:०३
२५ भदौ, म्याग्दी । म्याग्दीस्थित बेनीको महारानी थानदेखि बेनी नगरपालिका-४ डाँडाखेत जोड्ने सडकमा यातायात सेवा दिने व्यवसायीले मनोमानी भाडा असुल्ने गरेका छन् ।
महारानी थानदेखि डाँडाखेत हुँदै ठूलोखोलासम्मको कृषि सडकको दूरी ११ किलोमिटर छ । बेनीदेखि डाँडाबारीसम्मको २।५ किलोमिटर, फुर्केसल्ला पाँच किलोमिटर र डाँडाखेत सिस्नेरा आठ किलोमिटर छ । सो सडकमा राजन बानिया र शंकर किसानले जिपमार्फत यातायात सेवा दिँदै आएका छन् ।
सो सडकमा प्रतिकिलोमिटर १५ का दरले भाडादर कायम भएको थियो तर उनीहरूले पाँच किलोमिटर दूरीको फुर्केसल्लासम्म यात्रा गरेको १३० लिने गरेका छन् । बेनी नगरपालिका-४ का वडाध्यक्ष गोविन्दप्रसाद पौडेलले बढी भाडा असुलेको गुनासोका बारेमा उपभोक्ताले लिखित उजुरी गरेको बताए ।
वडा अध्यक्ष पौडेलले बेनीदेखि डाँडाखेत जोड्ने सडकमा १०० प्रतिव्यक्ति भाडा कायम भएकोमा आफैँलाई समेत व्यवसायीले १३० लिएको बताए । बेनी-दरवाङ सडकको बेनीदेखि ठूलोखोलासम्मको विकल्प मानिएको यो सडकबाट बेनी नगरपालिका-४, ५ र ६ का बासिन्दाले सेवा लिँदै आएका छन् । यस क्षेत्रमा २०० भन्दा बढी घरधुरीको बसोबास छ । पछिल्लो केही वर्षयता यो सडकलाई करोडौँ रकम खर्चेर स्तरोन्नति पनि गरिएको छ ।